‘स्वतन्त्र मधेश’को झण्डा राखिएकोप्रति केपी ओली किन मौन?: भीम रावल
On: २०७७ चैत्र ३० गते, सोमबार, ०१:०१ बजे प्रकाशित
काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सीके राउतका गतिविधिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरे। सीके राउतका कार्यक्रममा ‘स्वतन्त्र मधेश’को झण्डा राखिएपछि सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका हुन्।
नेता रावलले लेखेका छन्, ‘सीके राउतसँगको सम्झौतामा दुई देशबीच जस्तो भाषा प्रयोग र सभागृहमा महान् व्यक्तित्वझैं किन प्रस्तुत गरियो भनी मैले कुरा उठाएको थिएँ। जवाफमा ‘स्वतन्त्र मधेश’को नारा छोडेको भनिएको थियो। तर हालै सीके राउतको सम्मेलनमा ‘स्वतन्त्र मधेश’को ब्यानर–झण्डा राखिएकोप्रति प्रम केपी किन मौन?’
सीके राउतसंगको सम्झौतामा दुई देश बीच जस्तो भाषा प्रयोग र सभागृहमा महान व्यक्तित्व झैं किन प्रस्तुत गरियो भनी मैले कुरा उठाएको थिएँ।जवाफमा ‘स्वतन्त्र मधेश’को नारा छोडेको भनिएको थियो।तर हालै सीके राउतको सम्मेलनमा ‘स्वतन्त्र मधेश’ को ब्यानर-झण्डा राखिएको प्रति प्रमं केपी किन मौन?
२०७७ चैत्र ३० गते, सोमबार, ०१:०१ बजे प्रकाशित